Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika : mitandrema amin’ny kobaka am-bava
Pôlitika : mitandrema amin’ny kobaka am-bava
Raha toa ka tsy ho hendry amin’izao fahavoazana lehibe mahazo ny firenena izao ny vahoaka Malagasy dia tena efa lasa adala tanteraka. Fanaovan’ny mpanao pôlitika angoan-tenda sy kabary ambony vavahady mantsy ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra toa izao. Hiseho eto amintsika avokoa manomboka izao ny fampanantenana poakaty sy ny ronono an-tavy.
Inona tokoa moa no “slogan” tsy hita sytsy heno notenenin’ny mpanao pôlitika izay nitondra ny firenena izay. Tamin’ny andron’ingahy Tsiranana dia nalaza be ny hoe “asa fa tsy kabary”, nodimbiasan’i Ratsiraka hoe “Madagasikara tsy mandohalika”. Ingahy Zafy Albert indray dia “ento miakatra ity firenena ity”. Dia hoy ingahy Ratsirahonana hoe “ny asa vita no hifampitsarana”. Mbola nampian’i Ravalomanana Marc hoe “minoa fotsiny ihany” ary “amboary ny lalàna”. Tamin’ny andro tetezamita dia “ny fitiavana no lehibe indrindra” hoy i Andry Rajoelina. Ingahy Hery Rajaonarimampianina no tsy nanana “slogan” satria tsy niomana amin’izany.
Tsy ireo ihany no fanasana ati-doha hahazo ny vahoaka fa hatramin’ny resaka vola fampanantenana hoavy mamirapiratra, fiadiana amin’ny fahantrana sy ny sisa. Hatramin’ny hoe “homeko fiara -4L tsirairay ny vahoaka Malagasy”. Ireo rehetra ireo dia efa hita avokoa.
Ny zavatra misy nefa dia lasa mpanan-karena mpanefoefo avokoa izay avy nitondra firenena. Hadinony ny vahoaka ka ny fianakaviany sy ny namany no nataony ambonin’ny firenena. Nangalatra sy nandroba ny harena teto amin’ny firenena izy ireny. Koa mahaiza misafidy isika ary mahaiza mandinika sy mamakafaka. Fotoanan’ny fandaingana izao, hoy ny mpanao pôlitika ratsy.
Na izany aza dia aoka hazava ny raharaha fa mbola misy ny Malagasy izay tsara toetra, tia tanindrazana, manaja ny fomba sy ny hasin’ny firenena Malagasy toa ny anakandriamaso, ary miaro ny fananana iombonana ka tena mijery ny tombotsoam-pirenena. Fantatra amin’ny tantarany izy ireny. Hita amin’ny fomba fisehony koa ary mazava ny tiany hahatongavana sy ny tanjona ho tratrarina. Aoka hifampiresaka amin-kitsipo ny olona tsirairay, ary hijery ny tena marina sy azo antoka fa manana olo-manga i Madagasikara. Efa misy amin’izy ireo no nitantana sy nitondra firenena ary nanana andraikitra lehibe teto Madagasikara na dia tsy naharitra loatra aza. Mahaiza misafidy mba tsy hangidihidy indray afaka enim-bolana. Aza variana amin’ny fizarana vola, akanjo, elo sy lambahoany fa ireo namitaka ny vahoaka hatramin’izao.